दूरबीन Handle हिम बेल्चा - चीन Richina
मोडेल कुनै .: HT458
टाउको साइज: 458 * 344mm
संक्षिप्त लंबाई: 1160 * 1560mm
दूरबीन Handle हिउँ बेल्चा गुणस्तर, स्थायित्व र हल्का लागि पहिचान छ। यो दूरबीन हिम बेल्चा तपाईँलाई आवश्यक समायोज्य एल्यूमीनियम संग संकुचित सम्हाल्न र फारम 116-156cm विस्तार, दायाँ सधैं त्यहाँ। यो हिउँ बेल्चा एक ठूलो ब्लेड संग कुशलतापूर्वक र प्रभावकारी हिउँ खाली गर्न सक्नुहुन्छ। यो दूरबीन हिम बेल्चा हल्का संरचना संग पोर्टेबल र यात्रा-मैत्री बनाउँछ। तपाईं आफ्नो उचाइ समायोजन गर्न सुविधा बृद्धि लागि अनुमति दिन्छ। यो दूरबीन हिम बेल्चा राम्रो ह्यान्डलिङ लागि आदर्श छ जो एक आरामदायक पकड पनि।
समायोज्य एल्यूमिनियम ह्यान्डल संग प्लास्टिक हिम पुश बेल्चा
पतन लम्बाइ 1160-1560mm
पीपी blad हिमपात बेल्चा, एल्यूमीनियम काटन किनारा संग, ब्लेड आकार 458 * 344mm
हिउँ Pusher सहज डी-आकार पकड संग
बरफ बेल्चा blead र एल्यूमीनियम ह्यान्डल लागि जडान तस्वीर-लक
लहर करङहरु डिजाइन ब्लेड बल reinforces
संग एल्यूमिनियम ह्यान्डल निर्माता र आपूर्तिकर्ता आदर्श हिम बेल्चा खोज्दै हुनुहुन्छ? हामी तपाईंलाई रचनात्मक गर्न मद्दत गर्न ठूलो मूल्यहरु मा एक विस्तृत चयन गरेको छ। सबै दूरबीन हिम बेल्चा गुणस्तर ग्यारेन्टी हो। हामी चीन मूल कारखाना दूरबीन हिउँ Pusher । तपाईं कुनै पनि प्रश्न छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिच्किचाउनुहोस्।
Alu ट्यूब हिम बेल्चा
कार प्लास्टिक हिउँ बेल्चा
ठूलो हिमपात बेल्चा Pusher
म्यानुअल हिम बेल्चा
हिम धकेल्नु पुस एल हल कोणात्मक
पुस हिम बेल्चा संग पाङ्ग्रा
लघु हिम बेल्चा
सानो हिम बेल्चा लागि कार
हिम बेल्चा गाडी
हिम बेल्चा सम्हाल्नेहरू प्लास्टिक
हिम बेल्चा धातु
हिउँ बेल्चा व्हील
हिउँ बेल्चा Wheeled
हिम बेल्चा संग व्हील
काठ ह्यान्डल हिमपात बेल्चा
हिम बेल्चा / Pusher
हिम हटाउनका लागि हिम Shovels
हिम Shovels हिमपात हटान धातु लागि
इस्पात हिउँ Shovels
हिम बेल्चा पछाडि वाल्क
Wheeled हिम बेल्चा
वाइड हिम Shovels Pushers
पाली ब्लेड संग Ergonomic हिम Pusher
हिम बेल्चा उपकरण को व्यापक सीमा विकल्प
टिकाऊ धातु किनारा हिमपात बेल्चा Pusher
ब्रश संग कार आइस खुरचनी
एल्यूमिनियम हेड संग कार र ट्रक बेल्चा